Were ohere ma mepụta akaụntụ Sugarlove gị na-akwụ ụgwọ ugbu a!
Resend ebighị Code
Biko tinye adreesị ozi-e e debara aha gị ebe a ka anyị nwee ike ịzighachi gị njikọ njikọta.
Adreesị ozi ịntanetị	*
Ndụmọdụ 19 na ndụmọdụ:
1) Aha njirimara profaịlụ - bụrụ ihe okike
Mgbe ị mepụtara profaịlụ gị na Sugarlove1, a ga-ajụ gị maka aha njirimara gị. Ọ dị mkpa na ị bụ ihe okike na ịhọrọ aha njirimara gị. Pụtara zere ịmepụta aha njirimara na ọdịnaya mmekọahụ yana profaịlụ adịgboroja. A machibidoro ha iwu ozugbo!
2) Jiri ezigbo profaịlụ foto
Họrọ ezigbo foto nke onwe gị. Dị ka mmalite, ị kwesịrị ịhapụ ịhapụ ụmụaka na profaịlụ profaịlụ gị. Datebọchị gị nwere ike ịchọpụta ozi profaịlụ ma ọ bụ ọbụlagodi na ụbọchị. Ihe dị mkpa nye ọtụtụ bụ inye echiche banyere ọdịdị gị. Ọ bụ àgwà gị dị mkpa, mana foto profaịlụ dị mma na-adọrọ anya.
Họrọ ihe oyiyi nke doro anya ma dị mma. Foto a kwesiri ka nma karie otutu otutu afo, ma gosiputara uzo i siri di taa. Enwere onwe gị ịnweta enyi iji see gị nke ọma.
3) Dee ederede profaịlụ di nma
Ọ dị mkpa na ị nwere ederede profaịlụ. Onweghị ihe na-agwụ ike karịa ịga profaịlụ ị nweghị ike ịgụ ihe ọ bụla gbasara ya.
Mgbe ị na-ede ederede profaịlụ, cheta na ọ ga-ezu oke. Nke a pụtara na ọ gaghị adị mkpụmkpụ ma ọ bụ too ogologo. Odighi nfe, kama gee nti n’olu gi. Ọ bụrụ na ọ na-ekwu na ederede toro ogologo, gafee ya ọzọ wee mezie ya. I nwekwara ike sọfụ gburugburu ntakịrị na Sugarlove1, ma hụ ihe na - ejide gị na ederede profaịlụ nke ndị ọrụ ndị ọzọ. Na-enweghị iyingomi n'ezie.
Dịka ọmụmaatụ, gbalịa ịkọwa onwe gị site na akụkọ mere eme. Otu akụkọ na-egosi na ị nwere obi gị n'ebe kwesịrị ekwesị. Nke a ga-enwerịrị ike imeghe anya gị na onye na-agụ ya.
4) Mepụta mkpokọta foto nke onwe gị na profaịlụ gị
Mgbe ị na-eleta profaịlụ Sugarlove1, ọ na-atọ ụtọ ịhụ foto. Na ihe oyiyi gị ị nwere nhọrọ iji tinye ihe oyiyi na-egosi gị n'ọtụtụ ọnọdụ. Okwesighi ịbụ foto profaịlụ na uwe elu na uwe na-eso gị ebe niile. Mee ngwakọta n'etiti ọnọdụ atọrọ na onyogho dị jụụ. Ọ na-enye foto zuru ezu banyere gị dị ka mmadụ.
5) Na-atọ ọchị ma gosipụta ọ joyụ, ọkacha mma na ntabi anya
Mgbe ị na-ede na profaịlụ gị, gbalịa kpaa ọchị ma gosipụta ọ joyụ. Ọ bụrụ n ’igosi na ị na-eche Sugarlove1 bụ ihe ọ funụ, yabụ na ohere ndị ọzọ nwere mmasị n’ebe ị nọ ka ukwuu.
6) Bụrụ onye
Gbalịa ịbụ nke onwe. Ọ bụrụ na ị bụ onye elu elu, a ga-ahụta gị ka nke a, ma ohere ịjụ gị karịrị akarị. Ya mere, gosi onye ị bụ ma jide n'aka na ọ ga-enwe mmetụta na ihu na ihu.
7) Bịanụ na-apụ apụ
Mgbe ịmechara profaịlụ gị, ọ bụ naanị ịnọdụ ala na ichere maka onyinye ị ga-abanye, nri? Mba! Nke a abụghị otu piano si akpọ. Bụrụ onye ọrụ ma na-arụsi ọrụ ike, ma ọ bụrụ na ị hụ profaịlụ na-adọrọ mmasị, were ohere ma gbalịa ịkpọtụrụ. Ha bụ mmadụ ole na ole nwere ike ichere ka akpọtụrụ ha. Ma zere ịkpọtụrụ naanị site na ịde “Ndewo” na ozi ahụ. Ọ na-agwụ ike. dee ozi nke malitere mkparịta ụka.
8) Banye na atụla anya ka ndị ọzọ bute ụzọ
Mgbe shuga na-aga n'ịntanetị, dịrị njikere ibute ụzọ. Ọ bụ ole na ole nwere ike ịnọdụ ala ma kwe ka ịhụnanya bịa na-akpaghị aka. Banye ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ya. O siri ike ịme ma ọ bụrụ na ịnọdụ ala na aka gị ma ọ bụ chee "ọ nweghị mmasị m ma ọlị", na nke ahụ nwere ike ịbụ eziokwu, mana ị gaghị achọpụta ma ọ bụrụ na ịnwale. Ndụmọdụ a dịkwa mkpa maka ụdị mkpakọrịta nwoke na nwanyị ọ bụla - atụla ụjọ ibute ụzọ!
9) Na-akpa àgwà ọma ma na-akwanyere mmadụ ùgwù
N'oge ndị a mgbe arụmụka banyere ụda dị mma - yana na ịntanetị - na-ada ụda n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbasa ozi niile, ọ dị mkpa icheta na anyị ga-adịrịrị mma na ibe anyị. Abia na ntanetị Sugarlove1, ọ bụ ezigbo ezigbo echiche ịkpa agwa nke ọma. Inwe obi ọjọọ ma ghara ịdị jụụ na-emechikarị ọnụ ụzọ karịa ka ọ na-emepe.
10) Na-atụ anya na ọ ga-ewe ọtụtụ mgbalị na oge iji chọta nke ziri ezi
Chọta onye ziri ezi na mbido mbụ mgbe ị na-abanye n’ onlinentanet abụghị ihe ọzọ karịa iwu. Ọ na - eme, n'ezie, mana ị kwesịrị ịtụ anya na ọ ga - ewe ụfọdụ ụbọchị na - agba mbọ na ụbọchị dị iche iche iji chọta nke kwesịrị gị.
11) Ekwela ka iju gi wepu ochicho icho anya maka ubochi
Ọ bụrụ na a jụrụ gị - ọbụlagodi mgbe gị na onye na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị ibe gị na-eyi oge mkpa - adala mba na ọchịchọ. Gaba na-enwe fun na ya. Ohere nke ịga nke ọma dị elu, n'ihi na ọ dịbeghị mgbe ọ bụla ndị mmadụ na-eji mkpakọrịta nwoke na nwanyị n'ịntanetị mkpakọrịta nwoke na nwaanyị karịa ugbu a. Nke a metụtara ma nwata ma okenye. Ngalaba 60 + na-ejikwa ịntanetị mkpakọrịta nwoke na nwaanyị iji chọta ma ndị enyi ọhụrụ na ụmụ nwoke. Ya mere, n'ikpeazụ, anapụla gị ọchịchọ nke ụbọchị n'ịntanetị n'ihi ịjụ nzuzu. Ọ bụ akụkụ dị ndụ nke ndụ nke kachasị mma n'egedege ihu ya.
12) Dee ihe ichoro
Mgbe ị na-ede ederede gị maka profaịlụ Sugarlove1 gị, dee ihe ị na-achọ. Ọ na-enye ndị ọzọ ohere ka mma iji metụta gị na ihe ị tụrụ anya ya. Chetakwa na nke a bụ echiche mbụ ha na-enweta banyere ụdị onye ị bụ, yabụ lelee ya ọzọ ma ọ bụrụ na ederede ederede na ụdị onye ahụ dakọtara.
Ọzọkwa, buru n’uche na ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ ihe ị chọrọ, ọ nwekwara ike imenye onye gị na ya nwere ike ịpụ. Onweghi onye zuru oke.
13) Dee akwụkwọ tupu ụbọchị mbụ
Ndụmọdụ dị ezigbo mma bụ ka edekọ akwụkwọ tupu gị na nwoke aga ịlụ. N'ụzọ dị otú a ị ga-achọpụta ngwa ngwa ma ọ bụrụ na e nwere ụdị kemịl na ide kemịl bụ ezigbo ebe ị ga-amalite. Chọpụta a obere ihe banyere onye ọ bụla na-ahụ ma ọ bụrụ na ị dị nnọọ dabara a obere bit. Ozugbo ọ dị, ị nwere ike ịhazi ụbọchị mbụ. Ọ na-abụkarị ihe dị mma ịdebe ya n'oge mbụ - dịka ọmụmaatụ karịa iko kọfị. Nke a bụ ụzọ kpochapụwo iji zute ma mara ibe ha.
14) Jiri obi eziokwu gosi mmasi
Mgbe ị na-agwa ndị na-aga ime ihe na-atọ gị ụtọ ma na-atọ gị ụtọ, nwee ezigbo obi ma gosi mmasị n’ebe onye ị na-ede ozi nọ. Gosi na ịchọọ onye ahụ, mana ọ bụghị nke ukwuu nke na ọ ga - adị ka stalker. Ọ bụ isi ntụgharị nke.
15) Guzo n'omume na echiche gi
Ọ na-egosi na ị nwere ọkpụkpụ azụ na iguzosi ike n'ezi ihe. I gha aghaghi ikwuputa ha ma ndi ozo ekwenyeghi. Mana cheta idowe olu dị mma mgbe ị na-ede ihe. Cheta na ịnọghị n'ime ya maka esemokwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
16) Na-ekwu eziokwu
Kedụ ka mmadụ kwesịrị isi kwuo eziokwu mgbe ọ na-eji Sugarlove1? Ọ bụ ezigbo ajụjụ mgbe niile ma enwere ọtụtụ echiche dị iche iche na ya. Mana ọ bụrụ na ị ghaara ya ụgha, onye nwere ike ịbụ "naanị otu" gị, mgbe ahụ ọ nwere ike bụrụ nsogbu mgbe emechara.
17) Buru onye okike ike karia ihunanya (oge ga adi na nke ozo)
Na Sugarlove1, a na-akwụghachi ihe okike. Often na-ekwenyekarị site n'okwu ọnụ ma ọ bụ na foto karịa ịbụ nke ihunanya oge gboo. Yabụ, ịkwesịrị ikwe ka ikike na echiche okike gị mebie agụụ inwe mmekọrịta ịhụnanya n'oge a na usoro a. Jiri ike mepụta profaịlụ dị mma, na-atọ ụtọ ma sie ike.
18) Nabata ajuju
Mgbe mmadụ zara gị na ị bụghị maka ha, nakwere ya. Eeh, ọ nwere ike ịdị na-agwụ ike, mana ọ bụ etu esi egwu ya. Ma ọ dị n ’ntanetị ma ọ bụ n’ezie, ị ga-atụ anya na ọ bụghị mmadụ niile na-eche na ị bụ nnukwu. "Egwuregwu Sugarlove1" bụ maka ịchọta onye na-eche na ị dị ntakịrị karịa onye ọ bụla, ebe ị laghachiri uche. Mgbe ị hụrụ onwe gị otu a, ị merie "egwuregwu" ahụ.
19) Ejila ya n’onwe gi ma ọ bụrụ na azaghị leta gị. Enwere ike 100 ihe
Ihe mbụ ị ga - eme mgbe ị malitere ịchọ onye gị na Sugarlove1 bụ iziga ozi ma kpọtụrụ onye ị masịrị. Mgbe ahụ ọbịbịa na-abịa, ebe ị na-eche maka azịza. Ma gịnị ma ọ bụrụ na ọ bịaghị ma ọlị? Ndụmọdụ Sugarlove kachasị mma bụ: Iwe iwe. Ikwesighi izere ibu ya. Ọ bụrụ na ịmee, Sugarlove1 nwere ike ịbụ ahụmahụ na-agwụ ike maka gị. Enwere ọtụtụ ihe kpatara na ịghara ịza. Iji maa atụ, o nwere ike ịbụ na ọ chọtala ihe egwuregwu ya, mana o mechighi profaịlụ ya.
Mepụta profaịlụ gị taa
Mgbe ị gụsịrị nduzi a, ịkwesịrị ịdị njikere maka ihe ịga nke ọma na Sugarlove1. Mana ọ bụrụ n’abụbeghị profaịlụ gị, ndụmọdụ na ndụmọdụ a agaghị enyere gị aka ịchọta nke ị na-achọ.
Sugarlove1 bụ ebe nrụọrụ weebụ Denmark na-eto eto shuga. Anyị achịkọtala ọtụtụ puku sugarlovers ọnụ, anyị nwekwara ike inyere gị aka. Ya mere, nzọụkwụ ọzọ doro anya: Mepụta profaịlụ na Sugarlove1 taa, yabụ ị nwere ike itinye ndụmọdụ anyị n'ule ahụ, ma chọpụta otu ihe na-atọ ụtọ ma dịkwa mfe ọ bụ mgbe mbụ ị pụtara na shei.
Ọ bụrụ n ’ị ka nwere ajụjụ, ezigbo ndị ọrụ na - arụ ọrụ Denmark dị njikere iji ekwentị ma ọ bụ ozi nyere gị aka. Ga-ahụ ozi kọntaktị na oge mmeghe ozugbo ebe a: Ọrụ ndị ahịa
Oge mmepe: Mepee awa iri abụọ na anọ
Ekwentị: (+ 45) 29 80 13 19